Umhla My Pet » Ngaba Ukuthandana A iboyfriend Boomerang?
ukubuyekezwa: Mar. 25 2020 | 2 min ukufunda
"Yena uyandithanda. Uyakuthanda ndim. "—Ongaziwayo
Yonke intombazana iye yomhla lo mfo. Nguye kuxhaphake Allergies leNtwasahlobo,. Manene, Uyazi elishicilelwe phantsi ...
Wacinga nengca aluhlaza kwelinye icala. Okanye "kwakufuneka isithuba sakhe." Ngoko, ngaphandle isilumkiso kakhulu, wenza isenzo shwaka eyayiza nkqu udini abanekratshi.
ukuba ukhale. Ubuza ukuba kutheni. ke ekugqibeleni, na ixesha kwaye umgama phakathi, ukuba bakwazi ukuphilisa intliziyo yakho uze uqhubeke.
Wothuka yakho, kweenyanga / kwiminyaka kamva ubuyisela. Eli ixesha roses ezibomvu, izibongozo ukuxolelwa, kwaye nomnqweno ukuba bavuselele amadangatye endala. Mamaxesha amaninzi, emva kokuba uye abe nomdla kumntu omtsha.
The 64,000 umbuzo uba ... Ukuba abuyelane naye, okanye ukuba intloko ngaphezulu neentlungu kwixesha elizayo?
kakuhle, konke kuxhomekeke ....
Nantsi IPHEPHA Cheat EZINOKUSETYENZISWA njengesikhokelo.
Ngaba yena wajika nokuba mnye kule mithetho cardinal ukuthandana? Ezi iya kuba-nos ezifana ukukopa nomhlobo wakho osenyongweni okanye isalamane, okanye nodlame, okanye waphule ukholose. Ukuba kunjalo, "Musa kudlula khona."
Kuye kubekho ixesha elaneleyo ukuba bakhulela kwaye beze ngokwemigaqo noko kwenzeka? Ngaba ngokwenene aqonde babepha- ngeendlela zakhe? Okanye ke ebenilangazelela mhlawumbi nje into eqhelekileyo?
Kutheni ufuna ubudlelwane sihlaziywe? Ngaba kuba chemistry phakathi ababini kuni kwaba kanye ashushu? Ngaba ufuna ukuboleka imali okanye indawo yokuhlala? Lula zange sisizathu esilungileyo nyanise. Musa ukuvumela ukuza kwakhe umva abe ezingumqobo kuwe.
Njani angazibona izinto? Ngaba indlela yakhe abandayo nangolunya? Okanye nobubele kwaye non-ugxeke? Njengokuba, guys abathabatha indlela njengegwala ngokuthi ukuphelisa ifowuni yonke zoqhagamshelwano ngequbuliso, okanye ndikuthumelela umyalezo obhaliweyo eziphelweni izinto kunqabile kubalulekile eqalile kunye kwakhona.
Ngaba kukho izinto ezintle ngaye ukuba kubi? Yenza elungileyo nengalunganga uluhlu ngoko bayifunde ngobulumko nangengqwalasela. Okubaluleke, sithobele icebiso yekomfa Maya ngelou: "Xa abantu kukubonisa ukuba ngubani na, abakholelwe. "
Ngokulinganayo ibalulekile njengoko iimeko ezingqongileyo yokuqhawuka wakho ixesha. Ngaba ekuhlanguleni kanye phambi kweKrisimesi? Emva kokuba wahlabeka okanye phantsi luck yakho? Abantu "abahlobo fair-yonakaliswa" uyakwazi kunqabile unokuthenjwa ngamaxesha anzima. Ucinga ukuba unethamsanqa Ngeningalifumananga, ukuba oku kunjalo. Sika ilahleko yakho.
Musa qwele iglasi champagne nje okwangoku. Cinga ngokuhamba naye ngasemva kwi "ixesha komlingwa" kunye "ukufikelela ngokupheleleyo." Kuba iziphumo ezigqwesileyo, trust kufuneka 'ezuzwe "hayi yokucinga.
Xa bayiqhekeza, kukho ikwayara yabantu chiming kwi, "Ndinixelele oku?" Ukuba wonke umntu wacinga ukuba anibufanele kuwe, kusenokuba kukho ingongoma apha. Musa ngoyaba oku njengento. Nangona uthando kuba yimfama, kufuneka nibe clueless kakhulu.
Onakho ekungcakazeni ziingqondo yakho self-esteem kwakhona?
Kukho ngokucacileyo amaxesha xa uthatha ithuba inokuba obuNgwevu embi. Ingaba unawo umsebenzi ngoku kwelinye ubudlelwane ukuba liqaqambile ethembisayo? Kule meko, i "kid uzakubuyiswa" kufuneka bavunyelwe ukuba babuyele!
Cinga la macebo ngexesha yokujongana iboyfriend Boomerang. Gcina engqondweni ukuba "Abo bangakwazanga ukufunda elidlulileyo iphelela phinda oko."